Bogga ugu weyn Waxa Lagu Sameeyo 100k Nigeria | Fikradaha Ganacsi ee Ugu Fiican
Hadday tahay dhaxal ahaan ama sidii lacag loo helay shaqo la qabtay, waxa lagu sameeyo 100k ee Nigeria mararka qaarkood waxay noqon kartaa caqabad adag.
Isagoo u malaynaya in ujeeddadaadu tahay inaadan lacagta afuufin. 100k waxay dadka qaar u dejisay nolosha, iyaga oo kobcaya iyagoo dib u maalgelinaya dhammaan faa'iidooyinkii ay ka sameeyeen meheradda oo dib ugu soo celiya meheraddii.
Waxaa laga yaabaa inaadan haysan fikradda ganacsi ee ugu fiican, laakiin annagu waan haysannaa, maqaalkani wuxuu rajaynayaa inuu isku dayo inuu ku hago si loo hubiyo inaad lacagtaada ugu fiican ku samayso, ama ugu yaraan waxa xiga ee ugu fiican.
Kaliya samee wax soo saar leh oo wax ka baro khibrada. Ganacsigu waa geedi socod soo noqnoqda. Waxaad wax ka baranaysaa wareeg kasta oo cusub, ee geli.
The Guardian-ka waxay leedahay sheeko ku saabsan laba halyeey iyo sida ay ku bilaabeen ku dhawaad ​​isku lacag iyo sida ay labadooduba u kala duwan yihiin. Sheekadu waxay ku saabsan tahay Jim Ovia iyo Shina Peters.
Maqaalka ayaa laga soo xigtay isagoo leh “1990 -kii, Shina Peters ayaa guri ku dhistay N20 milyan oo naira; isla sannadkaas Jim Ovia wuxuu bilaabay Zenith Bank lacag isku mid ah.
Maanta, aniga iyo adiga qol kuma lihin guriga Shina laakiin waxaan ku leeyahay koonto bangiga Jim oo malaha adiguna waad leedahay.
Guriga Shina waxaa laga dhisay Iju Lagos wuxuuna ku yaallaa ilaa maanta. Bangiga Jim wuxuu ka bilaabmay gees wuxuuna hadda ku leeyahay in ka badan 500 laamood Nigeria, iyo laamo badan oo caalami ah. Malaayiin malaayiin meherad ganacsi ah oo ku jira bangiga Jim maalin kasta.
Gurigii Shina wuxuu noqonayaa mid sii burburaya. ” Tan looma soo xigan si loo muujiyo in midkood uu sameeyay wax xun, xulashooyinkoodu waxay ahaayeen kuwo caqli gal ah taasina waa hagaag.
Ujeedadu waxay tahay inaad samayn karto doorashooyin ka fiican adigoo wax yar gacanta ku haysta, taasina waa wax aanad marnaba ilaawin markaad safarkan samaynayso.
100k Naira ma lacag badan baa?
In kasta oo ay u caddahay qof kasta oo ku nool Nigeria inta ay le'eg tahay qiimihii naira, haddana wax badan ayaa lagu qaban karaa qiimihii ay ka tagtay naira.
Sannadkii 2010, 100k naira ayaa qiimihiisu ahaa $ 666. Sannadkii 2015, 100k naira ayaa qiimihiisu ahaa $ 546. Hadda sanadka 2021, 100k naira ayaa qiimihiisu yahay $ 257.89.
Tani waxay caddaynaysaa in maanta mar walba ay tahay maalin ku habboon in la maalgeliyo waxa aad haysato si ay u tarmaan.
Waa Maxay Fikrad Ganacsi Fiican?
Fikradaha ganacsi ee wanaagsan ayaa hagaagsan, laakiin waxaad dhaqaaqdaa oo keliya markaad aragto fursad. Erayada qorayaasha ganacsiga Edward Hess iyo Charles Goetz, ma kala garan kartaa farqiga u dhexeeya fikrad ganacsi oo wanaagsan iyo fursad ganacsi oo wanaagsan?
Fikradaha wanaagsan ayaa xiiso leh, laakiin fursadaha wanaagsan ayaa la qiyaasi karaa. Waxay yihiin qorshayaal la fulin karo oo leh saldhig macmiil oo aad heli karto oo aad ku sii dhisan karto.
Fikradaha ganacsi ee wanaagsan waa inay xalliyaan dhibaatooyinka, noqdaan kuwo la miisaami karo, macaash fiican samaynaya, adkaan kara nuqulka, oo aanay noqon uun jimicsi maskaxeed - waa inay dadka kale ka dhaadhicisaa kartideeda.
Waxa Lagu Sameeyo 100k In Nigeria - 11 fikradaha ganacsi ee ugu fiican
#1 - Saloon
Tani waa mid ka mid ah fikradaha ganacsi ee ugu wanaagsan oo aad hadda yeelan karto. Fikradda ganacsigu waa mid ka madaxbannaan dawladda (waad taqaannaa sida ay tahay arrimaha dawladda) umana baahna wax badan si loo bilaabo.
Cabsida laga qabo in robotyadu la wareegaan shaqooyinkii aadanuhu si sahal ah uma saameeyaan socodsiinta salon. Robotyadu waxay noqon karaan kuwo waxtar leh, laakiin waxay aad ugu adkaan doontaa inay beddelaan bini'aadamka daryeela timaha macaamiisha waxayna siiyaan taabashada aadanaha ee dabiiciga ah, aad bay uga yar tahay meel sida Nigeria oo kale ah.
Si aad u bilowdo saloon, waxaa laga yaabaa inaad u baahato ruqsado badan, laakiin maadaama aad bilowdo wax yar, waxyaabaha qaar ayaa adiga kuugu muhiimsan.
Ku maal geli 100k -kaaga sidii aad u heli lahayd goob dukaan, qurxin (in yar oo loo baahdo), aaladaha (shanlooyinka, maqasyada, kareemka timaha, jellada), iwm ka hor intaadan wax kale samayn.
Suuqa waa weyn yahay wuxuuna leeyahay awood aad u wanaagsan maadaama dadka Nigeria ay sii kordhayaan. Iyada oo lagu maalgelinayo tan, 100k -kaaga ma khasaari doono.
Haddii aadan samayn karin, hel qof kuu maamula.
#2 - Khadka dharka
Nayjeeriya waa dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika oo leh mid ka mid ah dadka ugu badan ee ku nool adduunka. Tiradani aad bay uga badan tahay 33 milyan oo way sii kordhaysaa.
Maaddaama isbeddellada ay sii socdaan, tirada dhallinyarada miyir-qabka ah ayaa sii kordhaysa, taasina waxay ka dhigan tahay in lacag badan lagu bixin doono moodada.
Maalgashiga qaybtan, sida kuwa kale oo badan, ayaa naftooda u meeleeya, waxay aadi doontaa waddo dheer si ay kuugu dejiso abaalmarinnada mustaqbalka.
Suuqa moodada ee Nigeria hadda waxay qiimihiisu yahay $ 4.7billion waxaana la filayaa inuu labanlaabmo sanadaha soo socda. Dadka reer Nayjeeriya way og yihiin moodada. Tani, si aan yarayn, uma saamayn warshadaha moodada ee dalka.
Si loo qanciyo dalabaadka maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah, naqshadeeyayaasha moodada Nayjeeriya waxay sannadihii la soo dhaafay kor u qaadeen cayaartooda xagga hal -abuurka iyo wax -soo -saarka. Oo hadda waxay garbaha ku xoqaan naqshadeeyeyaal caan ka ah xilliyadii kale ee bandhigyada moodada caalamiga ah.
Tani waa fursad ay tahay inaan la dhayalsan; iyo sida caadiga ah, bilow yar.
#3 - Ganacsiga cuntada
A dhawaan Warbixinta Ganacsiga Stears loogu talagalay 2021 wuxuu bixiyaa aragti ku saabsan sababta ay cuntadu muhiim ugu tahay Nigeria iyo sababta ay tahay inaad u maalgeliso 100k nairaaga ganacsiga cuntada. “… Xog laga helay Xafiiska Tirakoobka Qaranka ayaa muujinaya inay jirto cabbir run ah oo sheegashadu leedahay.
Intii lagu jiray qeybtii hore ee 2019, Nigeria waxay ku bixisay ₦ 334.3 bilyan oo raashin dibedda ah. Lacagta la isticmaalay waxay laba jibbaar ka badan tahay dakhligii dhoofinta ee aan ka helnay beeraha isla muddadaas.
In kasta oo dakhliga dhoofinta uu arkay koror joogto ah, soo dejinta cuntada ayaa sidoo kale diiwaangelisay isbeddel sii kordhaya.
Kobaca soo-dejinta cuntada ayaa ugu horreyn ah sababta oo ah kororka wax-soo-saarka dalagyada oo aan la kulmin dadka sida xawliga ah u koraya… ”waxay sii wadeen inay sheegaan in…
Waxa xiiso leh, qaar ka mid ah bariiskii maxalliga ahaa ee la soo saaray ayaa iyana la dhoofiyaa. Tani waxay dhacdaa maxaa yeelay waxay faa'iido badan tahay in lagu iibiyo cawska.
Sida laga soo xigtay Charles Isidi, madaxa kobcinta ee Thrive Agric., Qiimaha celceliska paddy ee Nigeria laga bilaabo Janaayo 2020 wuxuu ahaa $ 0.30, iyo celceliska qiimaha adduunka waqtigaas wuxuu ahaa $ 0.77. “Qiimaha dhoofintu waa ku dhowaad saddex laab qiimaha lagu bixiyo suuqyada maxalliga ah.
Tani waa dhiirigelin ku filan inta badan beeraleyda inay dhoofsadaan badeecadooda halkii ay ku iibin lahaayeen suuqa maxalliga ah. ”
Tani waxay caddaynaysaa in marka lacagta waqti la geliyo beeraha iyo ganacsiga cuntada, awoodda faa'idada aad u sarayso.
#4 - Waxbarashadaada
Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee loo maalgelin karo 100k naira oo aad u leedahay rajooyin aad u wanaagsan si aad u hesho ilaa 5x lacagtaadu waa inaad naftaada maal gashato. Xirfadaha aad leedahay, waxbarasho, iwm.
Haddii aad u shaqaysay sidii aad u heli lahayd 100k naira, markaa habka aad u shaqayso waa la kordhin karaa si laguu diyaariyo si aad u kasbato dhowr jeer lacagtaas. Habkan, ma aha oo kaliya ag fadhida sugitaanka si loo dhiso, laakiin waxay kuu galaysaa, barashadaada.
Wax aan cidina kaa qaadi karin. Markaa u gudub koorsadaas ama barnaamijkaas aad waligaa doonaysay inaad samayso.
Ka dib markaad u samayso cilmi-baaris habboon koorsooyinka kuu diyaarinaya inaad kasbato wax badan, u gudub koorsada akhris-qoraalka maaliyadeed, koorsada is-hagaajinta, kaliya ku fiicnaada adiga oo ku maalgeliya 100k ama qayb ka mid ah adiga oo waxbarta naftaada.
#5 - Meheradaha dadka kale
Tani hadda waa wax. Waxaa jira barnaamijyo aad u tiro badan oo dadka siiya fursad ay lacagtooda ku gashadaan meherado ballan qaadaya inay bixiyaan boqolkiiba dhowr bilood kadib.
Inkastoo tani run tahay, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad "iftiimiso indhahaaga." Kuwo badan ayaa la yimid qorshayaal la mid ah qaar badanna way tageen, laakiin kuwii sharciga ahaa ayaa hadhay.
"Investy", oo ah muujinta maalgashiga bilowga PiggyVest, waa mid u fududaysay badbaadinta iyo maalgelinta dad badan. Investify waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay maalgashadaan fursadaha hoose iyo kan labaad.
Fursadahaan waa la tijaabiyay waxaana la xaqiijiyay in ay yihiin kuwo hoose iyo kuwo dhexdhexaad ah. Maalgelinta hoos timaada PiggyVest waa caymis.
#6 - Nadiifinta Qalalan
Tani ma aha mid aad u adag in la bilaabo oo la hirgeliyo. Iyada oo ay sii kordhayso tirada dadka Nigeria, waxaa hubaal ah inay jiri doonto baahi loo qabo nadiifiyeyaasha qallalan.
Rabitaankan ah in aad nadiif ahaato, laakiin awood la'aanta soo -jireenka ah si aad u gaarto heerarka nadaafadda ee la filayo welina aad haysato waqti firaaqo ah ayaa dadka kuu horseedi doonta marka aad bilowdo meheraddan.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad u bilowdo meheraddan waa meel bannaan, makiinad dhar dhaqasho oo yar, macaamiisha qaar, bir, iyo summad leh adeegyo dheeri ah oo wanaagsan.
#7 - Noqo ganacsade POS ah
Barta iibka ganacsiga waa mid ka mid ah meheradahaas oo aan u baahnayn hordhac dheeraad ah. Iyada oo la sugayo marka ay Nigeria si buuxda u gasho dijitaal, dadku waxay u baahan doonaan ganacsade POS maxaa yeelay bangiyadu kuma jiri karaan ama u adeegi karaan tirada macaamiisha u baahan lacag caddaan ah oo wax kala iibsiyo kala duwan ah.
Ganacsigaani waa mid baaxad leh. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa ruqsad aad ku shaqayso, goob macmiil oo fiican oo lagu kulmo, lacag joogto ah oo socota, iyo hab macaamil-u-habboon.
Taasi waxay samaysay, adigu waxaad leedahay meel dahab ah.
#8 - Ganacsiga dhuxusha
Waxaa muuqata rabitaan cunto oo sii kordhaya oo dhuxusha ah dhammaan Nigeria oo dhan. Qiimaha dhoofinta ayaa sidoo kale wadata meheraddan. Dhuxusha ayaa ka mid ah shidaalka la doorbido ee dalka sababtoo ah gaasku waa qaali, kerosene wuu yar yahay, korontaduna waa qalad Nigeria.
Soo saarista dhuxusha ayaa korortay ilaa 4 milyan oo tan sanadkii waxaana la saadaalinayaa inay kororto. Qaado meel.
#9 - Iibinta xoolaha
Ka ganacsiga xoolaha waa hal ganacsi oo la hubo inuu sii socon doono ilaa dhammaadka wakhtiga. In kasta oo maalgashadeyaal badani isku dayaan inay jagooyin qabtaan, sidoo kale waad qaadan kartaa taada.
Ka ganacsiga lo'da, doofaarka, riyaha, iwm ayaa wali arka horumar waxaana la filayaa inay sii korodho mugga marka wakhtigu sii socdo.
Markaad ka ganacsato tiro yar, waxaad sii wadi kartaa inaad lahaato xanaan, raran, iyo saadka oo laga yaabee inaad mar uun lahaato qayb weyn oo suuqa saamiyada injirta ah. Feker weyn.
#10 - Maalgeli suuqa saamiyada
Si ka duwan Ameerika halka xukunka 72 si aad u fiican ayuu u khuseeyaa si loo go'aamiyo sida dhaqsaha ah ee lacagta loo labanlaabi karo, halkan si fudud uma aha Dadku waxay jecel yihiin lacag, waxayna aad u jecel yihiin inay arkaan lacagta oo labanlaabmaysa.
Helitaanka qiyaas qallafsan oo ah inta ay qaadanayso in lacagta la labanlaabo ayaa sidoo kale ka caawineysa ninka caadiga ah inuu isbarbar dhigo maalgelinta.
Si kastaba ha ahaatee, xisaabinta xisaabeed waxay ku adkaan kartaa shaqsiyaadka caadiga ah si ay u xisaabiyaan inta waqtiga loogu baahan yahay lacagtooda si ay u labanlaabaan maalgashi gaar ah oo ballan qaadaya xaddi soo noqosho ah.
Sida ku cad xeerka 72, “Si loo qiyaaso wakhtiga ay qaadanayso in la labanlaabo lacagtaada, u qaybi 72 qiyaasta kobaca la filayo, oo lagu qeexay boqolkiiba.
Tusaale ahaan, haddii aad filayso inaad kasbato 10% sanadkii maalgashi 100k naira ah, waxay labanlaabi doontaa 200k naira qiyaastii 7.2 sano.
Maxaan u keenay xeerka 72? Sababta ayaa ah in aragti laga bixiyo waxa maalgelinta suuqa Nigeria ay u noqon karto dad badan. Dad badan, waxay u tahay uun waddo aan lacagtooda lumin, halka qaarkood ay u malaynayaan in maalgelinta suuqa Nigeria ay tahay ciyaar laga adkaado.
Nidaamka Nayjeeriya waa mid aan toos ahayn inkasta oo aad samayn karto khasaare wadne-xannuun leh, hal maalgashi ayaa ku soo bixi kara si ka baxsan sida aad u filayso.
Tan waxaa qayb ahaan sabab u ah tirada dadka Nigeria iyo xaqiiqda ah inay weli tahay dhaqaala soo koraya.
Tani waxay ka dhigeysaa wax aad u fiican cabitaanka tufaaxa kuwa ku guuleysta inay qabsadaan suuqa. Samee maalgelin sax ah waxaadna ku jiri kartaa jidkaaga farxadda leh si aad u hesho maalgalintaada 100k dhig ukunta dahabka ah ee maalinlaha ah sannado kadib.
Maalgeli kaydka aad fahantay oo ha qaadin khataro aan caafimaad qabin.
#11 - Maalgeli cryptocurrency
Bitcoins iyo cryptocurrencies kale ayaa ah raves hadda. Waxay samaysay qaar ka mid ah milyaneerro badan waxayna wali u diyaar garoobeysaa inay samayso qaar ka mid ah milyaneerro dheeri ah iyagoo iibsanaya oo haya oo laga yaabo inay iibiyaan. Horta naftaada wax baro.
Ma jiro dhammaad dabeecadda meheradaha aad ku biiri karto Nigeria. Ujeeddadu waa sida lagu barto Dugsiga Ganacsiga ee Harvard iyo Dugsiga Ganacsiga ee Lagos waa inaadan lumin lacagtaada. Fikradaha ganacsi ee ugu fiican waxay kaliya kaa rabaan inaad ku bilowdo 100k -kaaga.
Feejignow! Iska ilaali!
Sida lacag looga sameeyo kaydka 2022| Talo Dhab Ah
Sidee Idaacadaha Raadiyaan Lacag | 2022 Qaab Ganacsi oo Buuxa
Dib -u -eegista Socdaalka Deynta ee Chase 2022: Adeegga Dib -u -eegista Dhibcaha Dhibcaha ee ugu Fiican?
10 Shaxda Iimaylka Ganacsi ee ugu Fiican ee Bilowga iyo Shirkadaha 2022
Boostada ganacsi ee wanaagsan waxay noqon kartaa sababta kaliya ee aad dib ugu laabanayso si aad u ilaaliso gaar ahaan…
Betterment waa adeeg maalgashi kumbuyuutar oo qaata faahfaahinta ku saabsan da'daada, iyo dulqaadka halista si…
Waa maxay aagga xorta ah ee Panama? Sida ay u shaqayso iyo Shuruudaha
Aagagga Ganacsiga Xorta ah (FTZ) sida Panama, ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin nidaam midaysan oo aan dhibsanayn…
Dunida ganacsigu waxay ku kobcaysay fikrad kasta oo ay heshay ilaa Covid-19 uu yimid iyo wax kasta…